Nke a bụ otu ị gaghị esire ahịa na azụmaahịa ịre ahịa | Martech Zone
Anyị edeela tupu ọnụọgụ ọnyà ahịa. Dị ka onye a na-akwụ ụgwọ site n'oge ruo n'oge dị ka influencer, M obi abụọ nke otú ọtụtụ mmetụta mmekọrịta mmekọrịta na-Mbido.
Dị ka ihe atụ, ná mmalite afọ a, a kpọrọ m ka m bịa Ogige maka na abu m onye obodo influencer na soshal midia. E nwere ụyọkọ ndị folks a kpọrọ site na mgbasa ozi mmekọrịta - ha niile nwere nnukwu akara na njikwa na-ewu ewu na-emetụta engine maka Indianapolis. Trackzọ ahụ nyere ebe a na-adọba ụgbọala ma nyefee tiketi wee pụọ na mmemme ahụ. Agaghị m aga - enwere m esemokwu na nkeji ikpeazụ.
Otu n'ime ndị enyi m gara na-akparị ya, n'otu oge, ọkwọ ụgbọ ala a ma ama na-agagharị na ha ma ọ nweghị onye ghọtara ya… ha ga-ajụ onye ọ bụ tupu ha atụfu ụfọdụ foto na mgbasa ozi mgbasa ozi. Lee oke ohia! Mmetụta mgbasa ozi agbaghara na cylinders niile (nweta ya?) M gbalịrị n'ezie ịkpọtụrụ egwu ahụ oge a kpọrọ m ka m jide n'aka na ha egbughi ego ha. O nwebeghị onye kpọrọ m azụ. Anọ m ọbụna na ihe omume ebe m rịọrọ oge ụfọdụ na onye bụ isi nke na-enyere aka ịkwalite egwu ahụ… ọ kpopụrụ m, kwa.
Enwere ihe atọ akọwapụtara nke ọma mmetụta ahịa ahịa na mkpọsa a na-atụ uche ha niile:
Ndi ndị na-ege ntị na egwuregwu influencer ndị na-ege ntị ị na-achọ iru? Thezọ egwu ahụ gaara aka mma karịa ịkpọ ndị nwere otu narị ụmụazụ nwere mmasị ịgba ọsọ karịa m nwere ndị na-eso ụzọ 100k nke m na-amaghị ma ọ bụrụ na m na-eche maka ịgba ọsọ n'ihi na anaghị m ekwu maka ịgba ọsọ.
Enwere a akụkọ maka influencer ịkọrọ na ndị na-ege ha ntị ga-ada ụda? Igosipụta, iri nri na-akwụghị ụgwọ, ị drinkingụ biya, na ịga egwu n’efu abụghị akụkọ. Ọ gaara abụ ihe dị ịtụnanya ịnwe egwu na-ekwu maka njikọ ezinụlọ, akụkọ ihe mere eme, ndị ọkwọ ụgbọ ala, teknụzụ… ihe ọ bụla mana eserese biya.
Enwere a kpọọ ọrụ iji tụọ mmetụta nke mkpọsa ahụ? Ọ dị mma, yabụ enwere ike ịba ụba na olu-olu ụbọchị ahụ n'ihi na ndị a niile metụtara mmekọrịta kwuru banyere Brickyard. Haha! Anọ m na-egwu egwu - enweghi ịgba n'ihi na enweelarị narị puku kwuru puku ndị ezigbo egwu na-ekwu maka agbụrụ ahụ! Ndị mmetụta a agbanweghị ihe ọ bụla.
Ọ bụrụ na ebumnuche ahụ bụ ime ka ndị mmadụ si n'èzí ndị na-ahụkarị ya na egwu ahụ, ọ nyeghị aka. Anụbeghị m akụkọ na-akpali akpali…. n'ezie m nụrụ na ọ dịghị akụkọ na-abụghị nke enyi m na-achị ọchị banyere inweta tiketi n'efu. Akụkọ ndị a chọrọ ka ha kwekọọ kwesịrị azum kegide anyị mkpebi na-eme ka a zụọ.
Otutu ihe kariri ime ka ndi mmadu gha aza ndi mmadu gara ebe ahu. Ikekwe mpempe akwụkwọ maka inwe nzukọ mmekọrịta ha na-esote na egwu ahụ, ikekwe koodu ego ị ga-eso ndị mmadụ kerịta egwu ahụ, ikekwe ndepụta nke tweets, mmelite na foto ops nke achikọtara iji soro ndị ọrụ soro akụkọ banyere ihe kpatara ha ji aga ka track, ihe omume ndị na-abịa na-esote na ebe ịzụta tiketi.
Ọ bụrụ na ị ga-akwụ ụgwọ ma ọ bụ nyefee ihe ihe ntụnye, jide n'aka na ọ ga-arụ ọrụ maka gị! Anaghị m emegide ahịa impencer ma ọlị, ọ bụ naanị na ọ dịghị mfe dị ka ile anya na-emetụta ụfọdụ saịtị ma tụba ha tiketi niile n'efu. Ihe a gaara nnọọ mma!
Tags: Ogige brikọsọ Indianapolismmetụtaahịa ahịakloutọsọ ọsọ